Bandhigga Shirkadda - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
-QAABKA XIDHIIDHKA -
Himilada HIIGSIGA -
Shirkadda Shun AKF Medical Technology Co., Ltd. ls waa shirkad cusub oo la aasaasay 2020, waxaanan sameynay tallaabo tallaabo tallaabo tallaabo oo tallaabo tallaabo ah. waxaan u hoggaansameynaa dabeecadda digtooni, rabitaan daacad ah iyo daacad ", waxaan la shaqeyneynaa waaxyaha ay khuseyso ee dowladda hoose si loo ilaaliyo xasilloonida iyadoo la adeegsanayo heer sare oo xirfad-yaqaannimo ah.
Waqtigan xaadirka ah, waa ku filan tahay inaad la tartanto xabsiyo kale oo ka soo gala warshadahaan. Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan si firfircoon ugaqeyb galno bandhigyada weyn waxaanan soo jiidaneynaa macaamiil aad u tiro badan iyo kuwa wax iibsada si aan u weydaarsano, uga wada hadalno ugana soo iibsano 'homend hrad'
Shirkaddu waxay billowday inay dib-u-habayn ku sameyso marxaladda hore ee cudurka faafa ee 2020. Shirkaddayadu si dhakhso leh ayey kor ugu kacday duruufo adag oo adag, maaskaro taxane ah oo loo yaqaan 'AKF' ayaa lagu iibiyay tiro aad u tiro badan, Dhanka kale, AKF waxay si dhakhso leh ugu guuleysatay dhoofinta dukumiintiga qaraabada ee gudaha iyo dibedda oo ay u fidinaysay badeecooyin aad u wanaagsan dadweynaha si ay uga hortagaan aafada una ilaaliyaan caafimaadka.
AKF wuxuu diirada saaraa baahiyaha iyo caqabadaha macaamiisha wuxuuna ilaaliyaa Pace waqtiyada. lt wuxuu la mid yahay qabanqaabiyeyaasha bandhigga. Guang Zhou waxay qabatay Bandhigga masxafyada khuseeya - Guangzhou maaskaro lnternational iyo Qalabka indus-isku day bandhig. AKF ayaa sidoo kale kaqeyb qaadan doonta bandhigga.
AKF waxay si joogto ah u wanaajineysaa kartida xirfadeed ee maalgashiga R & D ee guriga, AKF waxay si joogto ah u dejisaa xalal horay loo sii qorsheeyay iyadoo la dhageysanayo codka isutagga iyo fahamka Caqabadaha ay la kulmaan macaamiisha howlaha isgaarsiinta Pro dibedda, Ugu dambayntii, AKF wuxuu noqday khabiir xalka u leh xirfadda.